Ciyaartoyda Manchester City oo helaya fasax dheeri ah – Gool FM
Ciyaartoyda Manchester City oo helaya fasax dheeri ah
Liibaan Fantastic February 3, 2018
(Manchester) 03 Feb 2018 Tababare Pep Guardiola ayaa go’aansaday inuu fasax siiyo ciyaartoydiisa kadib barbarihii kooxdu ay galabta la gashay Burnley.
Ciyaartoyda Manchester City ayaa fasax ahaan doona ilaa arbacada, markaas oo ay dib ugu soo laaban doonaan tababarka kooxda.
Guardiola ayaa arinkaan ula jeeda in ciyaartoydiisu ay nasiino fiican soo qaataan maadama kooxdu ay galayso jadwal aad u mashquul badan xili ay ciyaarayaan Champions League isbuuca dambe.
“Albaabada tababarka kooxdeena waa la xirayaa muddo dhan 4-maalin, ciyaartoydu waa ay safri karaan waana ay soo raaxaysan karaan, waa inay ka go’aan kubadda cagta muddo maalmo ah” ayuu yiri tababaraha reer Spain.
“Waa inay waqti fiican la soo qaataan qoysaskooda iyo asxaabtooda, arbacada soo socota ayaan halkaan ku kulmi doonaa si aan u samayno 3-tababar oo aan ugu diyaar garoobayno kulamada Leicester City iyo kan FC Basel ee Champions League”.
Manchester City oo taako loo dhigay
Chelsea oo isha ku haysa Maurizio Sarri